Abidy arabo - Wikipedia
Kitendry ho an'ny solosaina azo anoratana teny arabo
Ny abidy arabo dia abjady, izany hoe abidy tsy ahitana afa-tsy renisoratra, natao hanoratana ny fiteny arabo sy fiteny hafa koa, ka soratana avy ankavana miankavia. Nisy litera miisa 28 izy tamin'ny voalohany nefa ny fiteny tsirairay izay soratana aminy dia samy nanao fanovana arakaraka ny rafi-peo ao aminy. Tsy manana zanatsoratra hanoratana ny zanapeo ny abidy arabo fa mari-tsoratra sahalahala amin'ny teboka na faingo apetraka eo ambony na ambany na aloha na aorian'ny renisoratra hisolo ny zanatsoratra.
1 Ny anarany amin'ny teny arabo
2 Ny literan'ny abidy arabo
3 Tantaran'ny abidy arabo
3.2 Ny nampiasana ny maritsoratra
4 Ny mampiavaka ny abidy arabo
Ny anarany amin'ny teny arabo[hanova | hanova ny fango]
Amin'ny teny arabo dia atao hoe الْأَبْجَدِيَّة الْعَرَبِيَّة‎ / al-ʾabjadīyah al-ʿarabīyah, ("abjady arabo") na الْحُرُوف الْعَرَبِيَّة / al-ḥurūf al-ʿarabīyah ny abidy arabo.
Ny literan'ny abidy arabo[hanova | hanova ny fango]
Miovaova arakaraka ny toerana misy ilay litera ao amin'ny teny soratana ny endriky ny litera arabo (aloha, anatiny, aoriana), miova koa izy raha soratana mitokana. Ny ankamaroan'ny litera anefa tsy miseho afa-tsy amin'ny endrika roa ka ny voalohany raha soratana mitokana na eo aorian'ny teny, ny faharoa raha eo aloha na afovoan'ny teny. Misy litera telo izay manana endrika efatra miavaka, dia ny ع (ʿayn) sy ny غ (ġayn), ary ny ه (hāʾ).
Mitokana Laharany Anarany Sandan'isa Aoriana, anatiny, aloha DIN-31635 EI Feo
ا 1 Alif 1 اـــــا ā na â ā na â aː
ب 2 Bā 2 بـــــبـــــب b b b
ت 3 Tā 400 تـــــتـــــة t t t
ث 4 Thā 500 ثـــــثـــــث ṯ th θ
ج 5 Jīm 3 جـــــجـــــج ǧ dj dʒ
ح 6 Ḥā 8 حـــــحـــــح ḥ ḥ ħ
خ 7 Khā 600 خـــــخـــــخ ḫ na ẖ kh x
د 8 Dāl 4 دـــــــد d d d
ذ 9 Dhāl 700 ذـــــــذ ḏ dh ð
ر 10 Rā 200 رــــــر r r r
ز 11 Zāy 7 زـــــــز z z z
س 12 Sīn 60 ســـــســـــس s s s
ش 13 Shīn 300 شـــــشـــــش š sh ʃ
ص 14 Sād 90 صـــــصـــــص ṣ ṣ sˁ
ض 15 Ḍād 800 ضـــــضـــــض ḍ ḍ dˁ
ط 16 Ṭā 9 طـــــطـــــط ṭ ṭ tˁ
ظ 17 Ẓā 900 ظـــــظـــــظ ẓ ẓ ðˁ
ع 18 Ayn 70 عـــــعـــــع ʿ na ‘ ʿ na ‘ ʕ
غ 19 Rhayn 1000 غـــــغـــــغ ġ gh ɣ
ف 20 Fā 80 فـــــفـــــف f f f
ق 21 Qāf 100 قـــــقـــــق q ḳ q
ك 22 Kāf 20 كـــــكـــــك k k k
ل 23 Lem 30 لـــــلـــــل l l l
م 24 Mīm 40 مـــــمـــــم m m m
ن 25 Nūn 50 نـــــنـــــن n n n
ه 26 Hā 5 هـــــهـــــه h h h
و 27 Wāw 6 وــــــو w w w na uː
ي 28 Yāʾ 10 يـــــيـــــي y y j na iː
Tantaran'ny abidy arabo[hanova | hanova ny fango]
Ny abidy arameana amin'ny endriny nabateana na siriaka (avy tamin'ny abidy foinikiana (na fenisiana) izay niteraka ny abidy hebreo sy grika koa) no niteraka ny abidy arabo. Ny soratra arabo voalohany indrindra dia fanatsorana ny soratra nabateana.
Na dia ao anatin'ny fari-piteny ao amin'ny tapany atsimon'ny saikanosin'i Arabia aza ny fiteny arabo dia ny abidy ampiasaina ao avaratr'io faritra io no nampiasain'ny foko mpifindrafidra ao Arabia afovoany. Ny mponina tao amin'io faritra voalaza etsy ambony io no nanjaka tamin'ny lafiny ara-kolontsaina sy ara-toekarena tamin'izany fotoana izany. Ny soratra arabo voaporofo fisiana voalohany dia ny abidy kofy izay nampiasaina tao amin'ny foibe ara-kolontsain'i Kofa (Kufa) manodidina ny ony Eofrata.
Ny nampiasana ny maritsoratra[hanova | hanova ny fango]
Noho ny fiteny arabo miankina bebe kokoa amin'ny zanapeo noho ny fiteny nabateana (2) dia tsapa ny filana ny hanamarika ny zanapeo. Noho izany dia nampiasaina ny litera telo alif '(ا) sy ya (ي) ary waw (و) mba hanoratana ny zanapeo lava /â/ sy /î/ ary /û/. Taty aoriana dia very ny maha renisoratra ny alif (ا) ka ny hamza (ء) no nasolo azy haneho izany renifeon'ny alif izany. Vokatr'izany dia azo lazaina fa tsy tena abidim-drenisoratra (abjady) tanteraka ny abidy arabo:
Ny litera ya (ي) sy waw (و) dia nitazona ny maha renifeo sy zanapeo azy, nefa azo ampiasaina ho mari-panalavana ireo zanapeo mitovitovy fanonona aminy, na atao tohana iankinan'ny hamza (ء);
Ny litera alif (ا) dia tsy inona fa mari-panalavana na mari-piankinan'ny hamza (ء) fa tsy manana ny feony manokana;
Ny ya (ي) dia azo ampiasaina ho mari-panalavana ny zanapeo /a/ any amin'ny faran'ny teny ka miova endrika izy (ى) sady antsoina hoe ʾalif maqṣūra;
Mifamadika amin'izany koa ny hamza (ء) izay tsy manan-toerana voafaritra ao amin'io abidy io na dia heverina ho renisoratra mahaleotena izy ao amin'ny fanoratana ny fiteny mampiasa io abidy io.
Ny fiteny arameana dia nampiasa feo vitsy kokoa raha mitaha amin'ny fiteny arabo ka tsy maintsy niteraka fampifangaroana feo maro ao amin'ny litera iray izany tamin'ny fanoratana ny fiteny arabo. Mbola hita izany olana izany ao amin'ny fanoratana kofy ao amin'ny soratra mipetaka amin'ny zavatra naorina (trano sns.) sy amin'ny fanaovana sora-kaliana.
Tamin'ny taonjato faha-7 no nanampiana teboka eo ambony na eo ambanin'ny litera sasany mba hisian'ny fiavahana. Tamin'izany fanovana izany dia niova koa ny filaharan'ny litera ao amin'ny abidy: tsy nanaraka ny filaharan'ny litera ao amin'ireo abidin'ny fiteny semitika hafa ny abidy arabo fa nampifanakaiky ny litera mitovitovy andrika. Ny nandaharana ny litera qāf (ق) sy fā (ف) dia tsy lasa marin-toerana raha tsy ela taty aoriana. Tamin'ny voalohany, nandritra ny taonjato roa voalohan'ny hijra (fifindra-monin'ny mpaminany Mohamady sy ireo mpanara-dia azy avy ao Maka makany Medina) dia nisy teboka ny eo ambonin'ny litera qāf, ary ny fā tsy nahitana izany. Avy eo ny fā nasiana teboka teo amboniny, araka ny efa natao tamin'ny abidy arabo ampiasaina ao Magreba. Farany dia natao teo ambony ny teboky ny fā (ف) ary ny qāf (ق) nahitana teboka roa.
Ny mampiavaka ny abidy arabo[hanova | hanova ny fango]
Ny abidy arabo dia ahitana litera 29 (na 28 raha tsy isaina ho litera fa ho maritsoratra fotsiny ny hamza). Soratana avy ankavanana miankavia izy.
Maro ireo litera mitovitovy endrika (رَسْم‎ / rasm) ka tsy azo avahana raha tsy miampy ireo teboka ampiasaina ho maritsoratra apetraka eo ambony na ambanin'ny hitsin'ny fanoratana (ـبـ ـتـ ـثـ ـنـ ـيـ). Miisa 18 ny endri-tsoratra fototra (رَسْم‎ / rasm) ka ny fampifanarahana azy ireo amin'ny zava-misy ao amin'ny fiteny soratana aminy no isafidianana ny fomba ampiasana ireo teboka ireo.
Tsy miavaka ny sora-tanana sy ny sora-boky, na ny sora-madinika sy ny sora-baventy. Ny ankamaron'ny litera mifanakaiky anefa dia soratana mifandrohy na dia amin'ny endrika sora-boky aza, ary miovaova arakarana ny toerany ao amin'ny teny (aloha, anatiny, afara) na raha mitokana ny endriky ny litera. Ny rohy dia mety ho fohy na lava nefa tsy manova ny famakiana ny litera izany. Ohatra, ny كتب (ktb) dia vioasoratra mifanjihina araka ny tokony ho izy eto, nefa mety ho soratana amin'ny fomba malalaka kokoa hoe كـــتـــب amin'ny fanalavana ny rohy. Izany fanalavana izany dia mety natao mba hampanana endrika kanto ny soratra na noho ny halalahanan'ny faritry ny takelaka anoratana.
Misy litera enina (و ز ر ذ د ا) izay tsy azo arohy amin'ireto litera manaraka ireto, ka miteraka fahatapatapahan'ny fanoratana ny teny ahitana azy ireo. Ny elanelana manasaraka ny litera tsirairay ao amin'ny teny iray anefa kely kokoa raha mitaha amin'ny elanelana manasaraka teny roa. Ohatra, ny hoe Paris dia soratana hoe باريس (Bârîs) ka na ny â na ny r dia tsy mirohy amin'ny litera manarakaraka azy; raha tiana hororitina lava ny fanoratana dia azo atao ny manoratra toy izao: بــــاريــــس, nefa ny elanelana manasaraka ny â amin'ny r na ny r amin'ny î dia tsy azo halehibeazina.
Amin'ny maha abjady ny abidy arabo dia tokony ho fantatry ny mpamaky ny firafitry ny fiteny arabo na ny fiteny hafa soratana aminy mba hahafahany mahalala ny zanapeo tokony hiaraka amin'ny renifeo. Ao amin'ny fiteny arabo dia mitsinjara arakaraka ny fototenin-drenifeo ny zanapeo, araka ny fitsipiteny.
Ao amin'ny Kor'any na ireo boky fianarana anefa dia ampiasaina ny fanoratana ny zanapeo amin'ny endrika mari-tsoratra. Ao amin'ireo lahatsoratra nasian-janatsoratra rahateo dia misy mari-tsoratra fanavaham-baninteny ka ny tena fampiasa indrindra dia ny mari-pamantarana ny tsy fisian'ny zanapeo (سُكُون / sukūn) sy ny fampanjariana sosona ny renifeo (شَدّة‎ / shaddah).
↑ Ny hoe DIN 31635 dia fanafohezana ny hoe "Deutsches Institut für Normung" izay namoaka fomba famadihana ny litera arabo amin'y litera latina. Tamin'ny taona 1982 no nampiasana azy io voalohany ary io no ampiasain'ny mpikaroka tandrefana indrindra.
↑ Ny hoe "EI" dia fanafohezana ny hoe "Encyclopedia of Islam" izay rakipahalalana namoaka fomba famadihana ny litera arabo amin'ny litera latina.
↑ Araka ny fanoratana omen'ny Abidy ara-drafipeo iraisam-pirenena izay fantatra amin'ny hoe API amin'ny teny frantsay na IPA amin'ny teny anglisy.
↑ James Février, Histoire de l'écriture, Payot 1984, p. 269.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Abidy_arabo&oldid=978904"
Voaova farany tamin'ny 30 Desambra 2019 amin'ny 04:50 ity pejy ity.